यी २ राशिबीच प्रेम र विवाह गर्दा अत्यन्तै राम्रो हुन्छ ! – Khabar Silo
काठमाडौं । हिजोआज कतिपय मानिसहरुको प्रेम र वैवाहिक जीवन त्यति सहज बनिरहेको छैन । प्रेम विवाह गर्नेहरु पनि पछि डिभोर्स भइराखेको हुन्छ । यस्तो किन भइरहेको छ त ? ज्योतिषशास्त्र अनुसार विवाह गर्दा कुण्डली मिलाउनुपर्छ । यसो नगर्दा वैवाहिक जीवन लामो समय टिक्न सक्दैन । आज हामी तपाईलाई कुन राशिबीच प्रेम र विवाह गर्दा राम्रो हुन्छ यसको बारेमा बताउन गइरहेका छौं ।
यी २ राशि जुनसँग विवाह गर्दा वैवाहिक जीवन अत्यन्तै समधुर हुन्छ:-
कन्या राशी र मकर राशि : कन्या र मकर राशि भएका व्यक्ति एक अर्काप्रति इमान्दार हुन्छन् । यिनीहरु आपसमा कहिल्यै पनि झुटो बोल्न सक्दैनन् । ज्योतिष शास्त्र अनुसार यिनीहरु बिचको सम्बन्ध एकदमै बलियो हुन्छ ।
मिथुन र तुला राशि : वैवाहिक जीवन र प्रेमका लागि मिथुन र तुला राशिको जोडी अत्यन्तै सुन्दर हुन्छ भनेर ज्योतिष शास्त्रले बताउँछ । यी दुई राशि मित्र राशि ठहरिन्छन् । त्यसैले यिनीहरुको जोडी अत्यन्तै राम्रो हुन्छ । वैवाहिक जीवनका लागि प्रेम सम्बन्धको लागि यी २ राशिको सम्बन्ध दिगो हुन्छ ।
मेष र कुम्भ : मेष र कुम्भ राशि एक अर्काप्रति आकर्षित हुन्छन् । यिनीहरु प्रायजसो एक अर्काको साथमा रहन रुचाउँछन् ।एक अर्कालाई असाध्यै प्रेम गर्ने यी राशिबीच प्रेम र विवाह गर्दा लामो समयसम्म सम्बन्ध सुमधुर रहन्छ ।
सिंह र तुला : सिह र तुला राशिमा पनि सामाजिक रुपमा जोडिन मन पराउँछन् । यिनीहरुको आचरण मिल्ने हुँदा यी दुई राशिबीच अत्यन्तै सुमधुर सम्बन्ध रहने ज्योतिष शास्त्रले बताउँछ । अरुले हेर्दा डाहा लाग्ने सम्बन्ध यिनीहरुको हुन्छ ।
अरेबियन महिलाहरु किन यती धेरै सुन्दर हुन्छन? सौन्दर्यको रहस्य यस्तो पो रैछ्र…..(हेर्नुहोस् पुरा बिवरण)
काठमाडौँ । घरमा कमिला आउने जाने गरेको देख्नुभएको छ भने यसले केही संकेत गर्न खोजेको हुनसक्छ । ज्योतिषका अनुसार घरमा कमिला आउनु भनेको जीवनमा हुने परिवर्तनको संकेत हो । यदि घरमा कालो कमिलाको आवत जावत हुने गरेको छ भने यसले भाग्योदयको संकेत गर्छ । कालो कमिला आउदा आर्थिक समृद्धि हुनुको साथै सुख मिल्ने बताईन्छ । […]